कांग्रेस महाधिवेशन : धनराज गुरुङसँग हारेपछि गच्छदारको असहमति, पुनः मतगणना गर्न माग - ramechhapkhabar.com
कांग्रेस महाधिवेशन : धनराज गुरुङसँग हारेपछि गच्छदारको असहमति, पुनः मतगणना गर्न माग
१ पुस , काठमाडौं ।
विजयकुमार गच्छदारले उपसभापतिमा आफ्नो पराजय अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसको निर्वाचन समितिले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ। डा. शेखर कोइराला प्यानलका धनराज गुरुङसँग झिनो मतले हारेका उनी फेरि मत गन्न मागसहित सानेपा जाँदै थिए।
झिनो मतले उपसभापतिमा हारेपछि गच्छदार सानेपा जाँदै तर उनी अझैसम्म सानेपा पुगेका छैनन्। गच्छदार धनराजसँग केही मतले पराजित भएको अवस्थामा निर्वाचन समितिले पनि परिणाम सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको हो।
गच्छदारले सानेपा पुगेर फेरि मत गन्न निवेदन दिने तयारी थियो। कांग्रेस उपसभापतिमा सर्वाधिक मत ल्याउँदै शेरबहादुर देउवा प्यानलका पूर्णबहादुर खड्का विजयी भइसकेका छन्। यता मतगणनाको मध्यदेखि टक्करको अवस्था रहेकोमा गच्छदार अन्तिममा गुरुङसँग पराजित हुन पुगेका थिए।
कांग्रेस महामन्त्रीको मतगणनाको समय तय गर्न निर्वाचन समितिले बैठक बोलायो
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तरर्गत महामन्त्री पदका उम्मेदवारहरुको मत गणनाको समय तय गर्न केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बैठक डाकेको छ । समितिले महामन्त्री पदका उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई अहिले ८ बजे छलफलका लागि बोलाएको हो । उक्त छलफलपछि गणनाको समय तोकिने र गणना सुरु हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको २ महामन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट डा. प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल चुनावी मैदानमा छन् । पौडेल कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका हुन् । सिटौला र देउवा समूहले यो महाधिवेशनमा चुनावी तालमेल गरेका छन् । त्यस्तै डा. शेखर कोइरालाको प्यानलबाट गगनकुमार थापा र डा.मिनेन्द्र रिजाल महामन्त्रीको उम्मेदवार छन् । यता प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीको उम्मेदवार छन् ।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तरर्गत सभापतिमा पुनः शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यस्तै उपसभापतिमा देउवा समूहका पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला समूहका धनराज गुरुङ निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचन समितिले महामन्त्रीको मतगणना आज नै सकिने बताएको छ ।